Ny angon-drakitra manondro mpandresy ara-barotra mahagaga Super Bowl | Martech Zone
Alarobia, Febroary 11, 2015 Alahady Oktobra 4, 2015 Chris Hoyt
Ny dokambarotra Super Bowl mahomby indrindra dia mety tsy ilay eritreretinao. Na dia mitombo aza ny fahafahantsika manangona angon-drakitra, dia mbola manatratra ihany ny fahafahantsika mahatakatra angona. amin'ny Perscio, ny ekipan'ny mpahay siansa momba ny angona anay dia nanao fanadihadiana lalina kokoa momba ny asan'ny Twitter nandritra ny Super Bowl ary nahita fa ny dokambarotra malaza indrindra dia tsy voatery ho ireo izay nahazo ny valiny tsara indrindra. Ary koa, amin'ny faran'ity lahatsoratra ity dia misy an fomba fijery mifandraika amin'ny angon-drakitra anay!
Ny fanehoan-kevitra ratsy ara-pihetseham-po dia mitarika ho amin'ny habetsaky ny volanao, fa ny fihetseham-po tsara dia miteraka fifandonana bebe kokoa.
Ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao dia mahafantatra ilay doka malaza manerana ny firenena izay famonoany ny zaza hatramin'ny farany. Ity fanapahan-kevitra manaitra sy somary hafahafa ity dia nitarika ho amin'ny fanehoan-kevitra lehibe tao amin'ny media sosialy. Orinasa marketing maromaro no efa namoaka nisioka indrindra valiny mampiseho ny firenena ho mpandresy, saingy tsy nino izahay.
Ny eritreritray dia na dia mitarika bitsika marobe aza ny valiny ratsy, dia mety tsy ilay karazana hetsika tena tadiavin'ny Nationwide. Tamin'ny farany, angamba i Microsoft izay nandresy tamin'ny media sosialy nandritra ny Super Bowl.
Voalohany indrindra, nisy mihoatra ny Boka manerantany 28.4 tapitrisa mandritra ny lalao. Ireo mpizara mpikirakira anay dia nahazo olona manodidina ny 9 tapitrisa tamin'ireo. Heverinay fa haben'ny santionany tsara izany, mikasika ny 32%.
The Perscio Ny fianarana dia tsy mitovy amin'ny olona rehetra satria maka santionany amin'ny tweets REHETRA izahay fa tsy ireo mifatotra amin'ny kaontin'ny mpanao dokambarotra ihany. Midika izany fa manana fampahalalana bebe kokoa noho izay azonao sintonina avy amin'ny Twitter API izahay.
Nosintominay tamin'ny fomba roa ny angona avy amin'ny bitsika, nampiasana roa fiteny voajanahary ary koa mivantana @ Twitter ofisialy no nanonona. Ohatra, mampitaha ny bitsika rehetra amin'ny McDonald mifanaraka amin'ny endriny rehetra (w / o capitalization na plural) ary @McDonalds.
Nihazakazaka ny sioka rehetra izahay tamin'ny alàlan'ny zavatra fantatra amin'ny hoe famakafakana ny fahatsapana izay mampiasa algorithma hamaritana raha misy ny bitsika miabo na miiba (Polarity), ary koa ny zava-misy na ny heviny (Lohahevitra).
Nanangona lisitra _____ be indrindra izahay ho an'ny nisioka indrindra, fiheverana indrindra, ary fahatsapana antonony indrindra.
Eo ambanin'ny tsirairay tetezana Izahay dia nitanisa ireo retweet 10 voalohany mba hahafahanay manamarina tsara hoe nanao ahoana ny fifamoivoizana.
Ny isa isa - marika amin'ny alàlan'ny volavola
Exhibit A - Mampiseho ny ankamaroan'ny bitsika amin'ny “fiteny voajanahary”
Ao amin'ny Exhibit A, tianay aloha ny manamarika fa McDonalds Nandresy amin'ny volume madio. Na izany aza, nanamarika ny mpahay siansa momba anay fa ny fidirana ao amin'ny Super Bowl, McDonalds dia efa tena nanana fifamoivoizana tokoa.
Ka ny fanitsiana ny lalam-pifamoivoizana alohan'ny lalao, Nationwide dia azo isaina ho mpandresy amin'ny volan'ny varotra.
Ao amin'ny Exhibit A dia hitanao fa akaikin'ny Nationwide dia Skittles, Pepsi, ary Doritos. Microsoft dia tena lavitra lavitra ny lisitra, ka mety manontany tena ianao amin'izao fotoana izao; nahoana isika no mieritreritra fa nandresy i Microsoft? Eny, izany dia satria misy fisarahana BIG eo anelanelan'ny fomba firesahan'ny olona sy ny fomba fiasan'ny haino aman-jery sosialy.
Fifanarahana vs. Chatter
Mba hahafahan'ny orinasa iray mamadika bitsika ho zavatra azo tsapain-tanana, dia tsy maintsy misy ny hetsika. Ho an'ny Twitter, ny hetsika miharihary indrindra dia:
Araho ny kaontin'ny orinasa
Tsindrio rohy iray ao amin'ny bitsika
Ka dia nijery indray ny angona izahay mba hahitana hoe iza no nahazo betsaka tahiry avy amin'ny volany Twitter ary ny top 5 dia:
@McDonalds (indray, efa teo amin'ny avo ny volany)
Ka eto no ahitanao ny Microsoft efa nanao tsara kokoa noho ny Nationwide amin'ny tena fahazoana hetsika tena betsaka. Nanao fanamarinana maso ihany koa ireo URL ambony tao amin'ny Twitter izahay, ary i Microsoft no manana ny rohy indrindra miverina amin'ny fonenany manokana. Fa ahoana ny amin'ny sentiment? Iza no tena mahazo ny fitiavana ao amin'ny Twitter?
Fihetseham-po mifanohitra amin'ny ratsy
Ao amin'ny Exhibit B - fitadiavana kaonty sy fitadiavana teny voajanahary ambony no voapetraka araka ny polarity (tsara na ratsy) sy ny foto-kevitra (zava-misy na hevitra).
Ao amin'ny Exhibit B dia afaka jerenao ny kaontinay rehetra sy ny fitadiavana teny voajanahary ambony voaforona araka ny polarity (tsara na ratsy) sy ny lohahevitra (zava-misy na hevitra). Ny marika tsara indrindra dia @skechersusa, @BMW, ary @wix. Ny marika ratsy indrindra nataonay dia Victoria miafina, t-finday, ary tsy misy mahagaga manerana ny firenena. Ka dia hitanao tsara fa ny ankamaroan'ny fifamoivoizana ho an'ny firenena dia ratsy.
Noho ny fananany haavo avo lenta, ny McDonalds sy Microsoft no tampon'isa. Midika izany fa tsy mahazo fivezivezena be fotsiny izy ireo, fa ny resaka kosa dia tsara.
Ka raha ampianao daholo dia Microsoft irery ihany mpiady ambony manao tsara amin'ny metatra telo rehetra: ny habetsahana, ny firosoana ary ny fahatsapana.
Mazava ho azy, ary tianay ho mazava io, na dia mieritreritra aza izahay fa nandresy tamin'ny fifaninanana ara-barotra Super Bowl i Microsoft; Toa mandresy media sosialy foana i McDonalds.
Caveats sy Trivia
Na dia nisarika bitsika marobe aza izahay dia tsy izy rehetra. Ny sasany amin'ireo angona ireo dia mety hiova raha mijery 100% isika.
Ny loharanom-baovao hafa dia nametraka an'i Budweiser teo an-tampon'ny lisitra, ary tsy hitantsika ny antony. Tsy fantatray ny antony tsy fitoviana, saingy tianay ny hanaiky izany.
Ny laharan-tsoratray ho an'ny McDonalds dia tsy voasokitra ao amin'ny sary hitanay satria tsy nanana fari-pitsipika ho an'ny rehetra izahay. McDonalds fotsiny dia naneho buzz miharihary loatra fa hiditra amin'ny lalao ka tsy maintsy apetratsika amin'ny fehin-kevitsika izany.
@mercedesbenz ary @ weightwatchers nanana ny mpihaino nifandray indrindra tamin'ny siokany nahita ny fiheverana isaky ny sioka.
Tsy nisambotra izahay #LikeAGirl izay tenifototra malaza (ny ratsy). Na izany aza, ny fandinihana hafa dia mampiseho fa mbola tsy nahatratra ny habetsaky ny fiatraikany amin'ny valinay.
Momba an'i Perscio
Perscio dia ny mpiara-miasa aminao mifantoka amin'ny famoronana fotoana Big Data. Ny fahaizantsika manokana dia ahafahantsika mampifandray ny elanelana misy eo amin'ny tontolon'ny teknikan'ny Big Data sy ireo lafiny azo ampiharina amin'ny paikadin'ny orinasa. Miara-miasa aminao izahay hamaritana paikady, hisafidy vokatra, hampihatra vahaolana ary hanangana ny fahaizan'ny fikambanana handinika sy haka sary an-tsaina ny angona. Mianara bebe kokoa ary sintomy ny whitepaper, Misy izao tontolo izao lehibe momba ny angona.
Tags: foanavarotra tsara indrindravarotra superbowl tsara indrindralehibeBMWLexusny McDonaldMicrosoftmanerana ny firenenafihetseham-pofamakafakana ny fahatsapanaskechersskechersusafanadihadiana ara-tsosialyhaino aman-jery sosialysuper bowlvarotra Super BowlsuperbowlTwitterWix
Chris dia talen'ny varotra Perscio, mpiara-miombon'antoka iray mifantoka amin'ny famoronana fotoana Big Data ho an'ny mpanjifany, izay nanatombohany ny marika sy ny fandefasana hafatra hatrany ifotony, hatramin'ny logo ka hatramin'ny fantson'ny varotra.